Ny fitrandrahana finday amin'ny finday | Martech Zone
Ny fitrandrahana finday
Wednesday, May 14, 2014 Talata, May 13, 2014 Douglas Karr
Fahiny dia hafahafa be amintsika rehetra ny finday, nefa ankehitriny dia toerana iraisan'ny rehetra izy ireo. Ny finday avo lenta dia mandroso kokoa ary mifandray bebe kokoa noho ny teo aloha, ary mbola misy fivoarana vaovao sy manaitaitra ho an'ny orinasa lehibe maro.
Raha resaka branding sy doka dia ilaina ny mahafantatra ny fomba hahatratrarana ny mpihaino finday ary koa ireo mpampiasa solosaina mahalala tsara. Surge Digital dia tonga niaraka tamin'ny a infographic vaovao manambara ny maha-zava-dehibe ny tambajotra finday tena izy.
Fantatrao ve fa betsaka ny olona mampiasa ny findainy hanenjika ny mailaka noho ireo izay mampiasa PC birao? Ary misy fividianana finday avo lenta isan-taona mihoatra ny takelaka, solosaina finday sy birao fitambarana? Topazo maso eto ambany raha te hahalala bebe kokoa…
Surge Digital dia masoivohom-panamarihana an-tserasera izay manam-pahaizana manokana amin'ny fanentanana atiny sy ny fitantanana ny media sosialy, ary koa ny famolavolana tranonkala sy ny fampandrosoana.
Tags: Inboxfitetezana findayfifanakalozana findaye-varotra findayecommerce findaymailaka findayboaty findayfinday-barotrapaikady marketing amin'ny findaysosialy findayfinday mifanohitra amin'ny biraofitetezana tranonkala findaySocial Media Marketing
Google Analytics: Fanangonana votoaty ho an'ny famakafakana atiny